सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भोगेका ५० समस्याहरु
Published: 11 July 2016 | Hits: 7060
म २०६७ साल तिर शैक्षिक तालिम केन्द्र भोजपुरमा रहँदा शिक्षकको पेशागत विकास तालिमको अनुगमन सहयोग तथा अन्य अवसरमा विद्यालयमा पुग्दा शिक्षकज्यू हरुले राख्ने गरेका केही समस्याहरु छन् । यी समस्याहरु शिक्षक वर्गबाट आउँदा म आँफै जवाफ दिनु आवश्यक हो वा हैन त्यो छलफलको विषय होला । तर, समाधान जवाफले हैन नीतिगत र उपल्लो स्तरबाट समेत पहल हुनु पर्ने कुराहरु छन् । कत्ति पनि नसच्याइ मैले जस्ता को तस्तै नोटबुकमा टिपेका समस्याहरु छन् । यी समस्तयाहरुलाई तालिम केन्द्रको ब्लग बनाएर पनि राखेको थिए । तपाइलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो विषय सँग मिल्ने कुराहरु भएमा विषयगत रुपमा कमेन्ट लेखिदिनु भए राम्रो हुने थियो ।
1. ठूलो कक्षा control गर्न कठिन छ ।
2. विद्यार्थीहरु धेरै छन् कसरी म्यानेज गर्ने ?
3. English का Reference Book को अभाव छ ।
4. तलिममा सिकेका कुरा लागु गर्न कठिन ।
5. अभिभावकको विद्यार्थीको क्रियाकलापप्रति उदासिनता - विद्यार्थी अनुपस्थीत हुन्छन् ।
6. अभिभावकले छोराछोरीको पढाइप्रति रुची देखाएका छैनन् । (हो र ?)
7. प्रत्यके कक्षामा बालबालिकाको उमेर भिन्न भिन्न छ ।
8. अङ्ग्रेजि बोर्डिङ विद्यालयमा वढदो विद्यार्थी चाप, सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो ।
9. सि०अ०क०को तालिम छैन । आवश्यक भएको ।
10. विद्यार्थीहरु कापी किताव लिएर विद्यालय आउँदैनन् । शिक्षण गर्न गाह्रो
11. अभिभावकहरु बोर्डिङमा बालबालिकालाइ निगरानी गरेर पठाउँछन् तर सामुदायिक विद्यालयमा त्यसरी पठाउँदैनन् ।
12. विद्यार्थीको स्तर कक्षामा समान छैन । उच्च स्तरबाट शिक्षण गर्दा न्यून लाई नसमेटिने । न्यूनबाट जाँदा उच्च क्षमता भएकालाइ नसमेटिने ।
13. शिक्षकको गाइडबाट विद्यार्थीबाट समाधान आओस् भन्ने चाहना भएको तर त्यो हुन नसकेको
14. विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन् आएभनेपनी होमवर्क गर्दैनन् ।
15. शिक्षक निर्देशिका पाइदैन । उपलब्ध छैन ।सशुल्क भएपनि उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो ।
16. गृहकार्य जाँच गर्न समयको अभाव छ ।
17. नेपाली विषयमा शुद्धाशुद्धीको नयाँ मानक छैन । एउटै छैन । श र स को फरक हुने अवस्था के हो ? पाठ्यपुस्तकमा परिक्रमण, भ्रमणर प्रदक्षिणको एउटै अर्थ दिएको छ के यो सही हो ?
18. नेपालीमा छन्दको थोरै मात्र परिचय दिएको छ तर सिकाउनु पर्ने धेरै छ । SLC मा प्रश्न पनि सोधिँदैन । के यो हटाउन मिल्दैन ?
19. Liberal class promotion ले समस्या ल्यायो । CAS बाट कक्षोन्नतिबाट कक्षा ३ मा पुगेपनि क,ख,ग, नै पढाउनुपर्ने हो की ?
20. सामुदियक विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क भएर हो की अभिभावकको चासो कमी भएको?
21. Project Work विद्यालयमा मात्र सिमित भयो । विद्यार्थीहरु PW गर्न उत्साहित छैनन् ।
22. विद्यार्थिलाइ विद्यालयमा उपस्थीत गराउने सीप केही छ की?
23. सामाजिक अध्ययन विषयमा Socialization सीप भनेको के के हो? कति हो?
24. सामाजिक अध्ययनमा कक्षामा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइन्छ तर SLC मा प्रयोगात्मक परीक्षा राखेको छैन किन होला । राख्न सकिदैन र?
25. Geographical Map को projection शिक्षण गर्न गाह्रो भयो ।
26. पृथ्विको अक्षको झुकाव ६६.५ डिग्रि कता र कुन दिशामा हो ?
27. लोक नाच र गीत सम्बन्धमा पाठ्यपुस्तकमा समस्याहरु दिइएको छ तर उत्तर छैन । कहाँबाट पाउने ? कि दिनुपर्यो की हटाउनु पर्यो । यस्ता विषयवस्तु पाठ्यपुस्तकमा राखिएको छ जसको शिक्षण हामीबाट मात्र सम्भव छैन । Resource person ल्याउने भनेको छ तर त्यस्ता Resource Personn स्थानीय स्तरमा पाइँदैनन् ।
28. Field Trip मा विद्यार्थी control गर्न गाह्रो छ कसरी गर्ने ?
29. सानो कक्षाकोठामा धेरै विद्यार्थी रहेको अवस्था छ कसरि कक्षा ब्यवस्थापन गर्ने?
30. कक्षामा न्युनतम सिकाइ उपलब्धी समेत नभएका विद्यार्थी भएकाले समस्या अएको छ
31. विद्यालयका शिक्षकहरु जि.सि.का., तालिमकेन्द्र, सँघसँस्था, पेसागत सङ्गठनका कार्यक्रममा सहभागी हुँदाहुँदै कक्षाकोठामा समय दिन कठिन भएको ।
32. सिकाइ उपलब्धी बृद्धि गर्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि बृद्धि नभएको ।
33. भाषाका चार सीप विकास गर्न कठिनाइ भएको छ । कुन बाटोमा अगाडी बढ्ने?
34. Optional Math मा कुनै कुनै समस्या समाधान हुन्छ तर Formula मलाइ थाहा छैन । कसरी शिक्षण गर्ने?
35. विद्यार्थीले लेख्ने क्रममा (१, 4,9) र (6, ७ ) लाइ मिसाएर लेख्छन् । यस्तो समस्याको समाधान के हो?
36. कुनै कुनै विषयवस्तु शामाजिक अध्ययन विषायमा दिएको छैन । विद्यार्थीले किन यस्तो भयो होला भनी सोधेमा नाजवाफ हुनु परेको छ ।
37. शामाजिक अध्ययन विषायमाधेरै विषयवस्तु दिइएको छ । पाठ्यपुस्तकमा त्यसबारेमा सुचना दिइएको छैन । अनुमानको आधारमा शिक्षण गर्नु परेको छ ।
38. अभ्यासमा धेरै कुरा सोधिएको छ । कितावमा दिइएको छैन । विद्यार्थीले अभ्यास गरेर आउँदैनन् ।
39. समूह कार्य गराउन सकिएको छैन ।
40. हामीले सिकाउन खोजेको कुरा विद्यार्थीसम्म पुग्यो पुगेन भनी कसरी लेखाजोखा गर्ने?
41. लोक धुन, लोक बाजाका बारेमा धारणा दिने स्रोत हामीसँग छैन के गर्ने ?
42. विज्ञानमा Valency २प्रकारका दिइएकोव छ । यो किन भयो होला?
43. भवनका कारण विज्ञानको Experiment गराउन सकिएको छैन ।
44. अङ्ग्रेजीमा Reported Speech शिक्षण गर्न कठिन ।
45. अङ्ग्रेजीमा विद्यार्थी Response गर्दैनन् । लेखेको मात्र सार्दछन् । के गर्ने ?
46. सिकाइ उपलब्धी नभएका विद्यार्थीलाइ कछ्योन्नती नगराउनु पर्नेमा गराएकोले समस्या ।
47. शिक्षणसिकाइका लागि आवश्यक सामग्री किन्न प्र०अ० उदासिन छन् ।
48. एउटै कक्षामा १२० जनाभन्दा बढि विद्यार्थी छन् कसरी शिक्षण विधी, सामग्री र मुल्याङ्कन गर्न सम्भव हुन्छ र ? आमसभामा बोलेजस्तोव गर्नु परेको छ ।
49. हामी त स्थानीय भाषाका ठाउँमा अङग्रेजी पढाउँछौ । अभिभावक पनी त्यही चाहन्छन् ।
50. कक्षा दससम्मपनि विद्यार्थी नेपालीमा शुद्ध लेख्न र उच्चारण गर्न सक्दैनन् ।